Nvidia dia te hiditra amin'ny tsenan'ny fiara mitokana ihany koa ary nahazo DeepMap | Avy amin'ny Linux
vao haingana Navoaka ny vaovao fa nanao sonia fifanarahana ahazoana DeepMap i Nvidia, fanombohana voavidim-bola amin'ny alàlan'ny teknolojia fanaovana sarintany izay manampy ireo fiara mizaka tena hitety ny lalana azo antoka kokoa.
Deepmap miavaka amin'ny fanolorana vokatra mifototra amin'ny haitao map. Ny iray amin'izy ireo dia DeepMap HDR izay manampy ny mpanamboatra fiara hamorona sarintany ary manavao azy ireo hatrany miaraka amin'ny vaovao farany.
Vokatr'izany, ny fiara mizaka tena dia mahazo fampahalalana marina indrindra momba ny tontolo iainany. Ho fanampin'izany, DeepMap RoadMemory dia mamorona sarintany mandeha ho azy amin'ny fampiasana sensor izay mifamatotra amin'ny fiara mizaka tena.
Indrindra indrindra Ny vahaolana DeepMap dia efa neken'ny indostrian'ny fiara mizaka tena ary ny fahazoana dia antenaina hampanan-karena ny portfolio an'ny vahaolana amin'ny familiana mahaleo tena an'i Nvidia amin'ny alàlan'ny fampidirana ny haitao mahery momba ny sarintany DeepMap amin'ny rafitra fiasa mizaka tena, Nvidia Drive.
Na dia tsy nambara aza ny fe-potoana nifanarahana, azo antoka ny mieritreritra fa mandoa vola be i Nvidia amin'ny fanombohana. DeepMap dia nanangona famatsiam-bola mihoatra ny $ 90 tapitrisa hatramin'ny nanombohana azy enin-taona lasa izay avy amin'ireo mpampiasa vola toa an'i Andreessen Horowitz.
DeepMap Technology dia hanitatra ny tsipika fitomboan'ny vokatra Nvidia ho an'ny sehatry ny fiara. Ny orinasa dia namorona vahaolana vahaolana farany ho an'ny fiara mizaka tena izay tsy ny chip ihany no ao anatiny, fa koa ny fitaovan'ny rindrambaiko amin'ny fananganana, fiofanana ary fitsapana ireo rafitra mitondra fiara AI.
"Ny fahazoana izany dia fanamafisana ny fahitana, teknolojia ary olona tsy manam-paharoa an'ny DeepMap," hoy i Ali Kani, filoha lefitra ary tale jeneralin'ny Automotive ao NVIDIA. "DeepMap dia antenaina hanitatra ireo vokatra an-tsarintany, hanampy anay amin'ny fampandehanana ny fandrafetana an-tsarintany manerana an'izao tontolo izao, ary hanitatra ny traikefanay momba ny fiara mitokana.
"NVIDIA dia orinasa manova tontolo mahatalanjona izay mizara ny fahitanay ny fanafainganana ny fizakan-tena azo antoka," hoy i James Wu, mpiara-manorina sy CEO an'ny DeepMap. “Ny hery mitambatra amin'ny NVIDIA dia hamela ny haitao hiova haingana ary hahasoa kokoa ny olona haingana. Manantena ny hanohy ny dianay izahay ao anatin'ny ekipan'ny NVIDIA.
Nvidia hanohy amin'ny vokatra DeepMap tsy ho elaSaingy ny chipset sy ny manam-pahaizana manokana momba ny sampam-pitsikilovana dia hampiditra ny teknolojia miaraka amin'ny vahaolana fiara mahomby mahaleo tena sy mahaleo tena.
Ny portfolio an'i Nvidia dia tsy ny vahaolana feno ihany no ho an'ny fiara mahaleo tena, fa koa ny rindrambaiko amin'ny fananganana, fiofanana ary fitsapana ireo rafitra mitondra fiara mifototra amin'ny AI. Miaraka amin'izany i Nvidia dia manolotra fitaovana sy vahaolana ho an'ny fiofanana amin'ny tambajotra neural, fanamarinana ao amin'ny foibe data sy fampiharana fampiharana angovo avo lenta amin'ny fiara.
Ny ivon'ny portfolio an'i Nvidia dia ny andiany Drive AGX an'ny processeur an'ny system-on-chip. Izy ireo dia azo apetraka ao anatin'ny fiara mizaka tena mba hampiasa rindrambaiko miafina artifisialy izay mandray fanapahan-kevitra momba ny fitetezana.
Ny puce vaovao indrindra amin'ny andiany Drive AGX dia ny Orin, izay nofaritana ho impito heny haingana kokoa noho ny teo alohany fony izy nanomboka. Ny chip Orin tsirairay dia manambatra singa fanodinana sary miaraka amin'ireo singa fanodinana afovoany an'ny Arm mba handefasana asa maherin'ny 200 miliara isan-tsegondra.
Teknolojia momba ny sarintany Inona no ho azon'i Nvidia amin'ny fahazoana DeepMap dia hanatsara ny fahaizanao mamaly fepetra hafa tetik'asa lehibe an'ny orinasa izay manamboatra fiara mizaka tena. Mandritra izany fotoana izany, ny fifanarahana dia afaka manampy ny mpanao varotra manamafy ny fifaninanana amin'ny singa Mobileye an'ny Intel Corp.
Miaraka amin'ny fahazoana ny haitao DeepMap, tsy ho ela dia afaka hifaninana amin'ny portfolio an'ny mpifaninana Intel i Nvidia. Intel's Mobileye dia manolotra karazana vokatra sy vahaolana mitovy ho an'ny fiara mizaka tena. Ny fahazoana DeepMap dia tokony ho vita amin'ny telovolana fahatelo amin'ity taona ity.
Manantena ny hanidy ny fividianana i Nvidia amin'ny telovolana fahatelo amin'ity taona ity. Ny teknolojian'ny fanombohana dia hanitatra ny atin'ny Drive Mapping an'ny orinasa, izay ahafahan'ny fiara mizaka tena manangona sarintany iray avy amin'ny angon-drakitra nangonin'ireo sakan'izy ireo an-tsambo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Nvidia dia te hiditra amin'ny tsenan'ny fiara mitokana ihany koa ary nahazo DeepMap
Counter Strike 1.6: Ny fomba tsara indrindra hilalaovana an'io FPS amin'ny GNU / Linux!